गृहमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट सुर्य सुवेदीको राजीनामाMain Samachar
गृहमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट सुर्य सुवेदीको राजीनामा
९ पुष २०७७, बिहीबार १५:१० प्रकाशित
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका राजनीतिक सल्लाहकार सुर्य सुवेदी पथिकले जिम्मेवारीबाट राजिनामा घोषणा गरेका छन् । गृहमन्त्री बादल ओली समूहमा लागेपछि सुर्य सुवेदी पथिकले उनको राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
उनले सामाजिक संजालमा भनेका छन्, ‘गृहमन्त्री आदरणीय क. राम बहादुर थापा बादलको सचिवालय र उहाँको राजनीतिक सल्लाहाकारको भूमिकामा आजबाट राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले नरहेको जानकारी गराउंँछु ।’
गृहमन्त्री आदरणीय क. राम बहादुर थापा बादलको सचिवालय र उहाँको राजनीतिक सल्लाहाकारको भूमिकामा आजबाट राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले नरहेको जानकारी गराउंँछु।
Posted by Soorya Subedi Pathik on Thursday, December 24, 2020
नेकपा दुई समुहमा विभाजन भएपछि तटस्थ बसेका गृहमन्त्री बिहीवार ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार साँझ भएको भेटपछि नै उनले ओलीलाई सहयोग गर्ने भएका हुन् ।
यसअघि मोहन वैद्य समूहबाट माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा सम्म आइपुगेका अधिकतम केन्द्रीय सदस्यहरु भने प्रचण्ड–माधव समूह तर्फ नै रहेका छन् । पुरानो पार्टीबाट आएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई छोडेर उनिमात्र ओली समूहमा लागेका हुन् ।